1. Maamulaha Sare Task
Description: Maareeyaha Advanced Task gudbin karaan dhamaan hawlaha orodka, oo aad dooran kartaa qaar ka mid ah si ay u dilaan. Waxa kale oo uu leeyahay qalab maamulka app si ay u maareeyaan dhan barnaamijyadooda ku rakiban. App Tani ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad si ay u disho hawlaha, xusuusta oo lacag la'aan ah, speedup aad telefoon iyo batari badbaadiyo. Waxa kale oo ay si toos ah u dila hawlaha mar walba oo aad shaashadda iska tagaa. Waxaa intaa dheer in, app taasuna waxay ka timaadaa iyadoo tababare uninstaller iyo batari deg deg ah.
Si tayo leh soo bandhigay oo ay gacanta ku hababka
Kharashka badan oo lacag kale oo lacag la'aan ah oo loo siman yahay waxaa laga heli karaa
Windows yimaado iyadoo tababare shaqo. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Hab-Explorer ama barnaamijyadooda la mid ah in ay yihiin lacag la'aan ah
2. Android buusterka
Description: Android talala oo caawiye aad android si aad u nadiifiso oo ay u ilaaliyaan telefoonka smart ama kiniin. Waxaa xoojinaysa qalab aad sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah in si toos ah loo horumariyo doonaa waxqabadka nidaamka Android. Ilaa hadda, app waa la soo bixi malaayiin jeer, oo haatan waxaa lagu heli karaa lacag la'aan ah in Store Play.
Faa'iido: app Free Timid kala duwan oo ka mid ah qaababka
Coobbi 3. App Cache
Description: Coobbi App Cache waa qalab degdeg ah in la nadiifiyo doonaa khasnado ee codsiyada oo dhan. App waxa uu leeyahay muujinta nadiifinta mid tab in nadiifin kartaa dhammaan faylasha kaydin doono samaynta meel dheeraad ah laga heli karaa. Qalabkani waxa uu sidoo kale lacag la'aan ah karaan wax badan oo ka mid ah xasuusta kaydinta in aad telefoon. Haddii aad soo baxeen oo meel bannaan oo kaydinta codsiga, aad haatan ka heli kartaa meel dheeraad ah ka heli kartaa adigoo soo reynaya barnaamijyadooda abuuray files khasnado / data.
Faa'iido: interface ee app waa mid aad u fudud oo si sahlan loo isticmaali
Qasaarooyinka: Too weyn ee size oo halkan app ka cunay badan oo ka mid ah meel keligeed
4. xawaaladaha Manager Free
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 2
Description: Maareeyaha xawaaladaha kaa caawinaysaa in aad gab entries nidaamka xawaaladaha loo baahnayn, marka aad kabaha telefoonka ama kiniin. Waxay soo kormeertaa oo ay muujinaysaa liiska barnaamijyadooda xawaaladaha iyo khayraadka. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso si gab shay ka nidaamka xawaaladaha waa uncheck codsiga ka mid ah liiska. Waxaad sidoo kale dib-u-awood karaan barnaamijyadooda ama khayraadka la isticmaalayo isla liiska entries xawaaladaha. Xataa waxaad uncheck kartaa dhammaan entries xawaaladaha in badan si kor loogu qaado xawaaraha nidaamka xawaaladaha. Haddii aad rabto in aad kaliya awood app gaar ah, si fudud awood ku entries xawaaladaha.
Waxaa deggan oo ka shaqeeya ku dhowaad gebi ahaanba ee asalka ah
Mudanayaasha waxay tahay si caddaalad ah oo fudud oo ah dadka isticmaala inta badan la telefoonada geelaa waa in ay leeyihiin wax dhibaato ahna ma qabsado goobaha
Waa app Fidmo
Coobbi 5. 1 Tubada
Description: Inkastoo app tani waa doorasho fiican, magaca waa xoogaa aan sax ahayn. Menu waa fududahay in la isticmaalo, iyo dulmarka iyada oo muuqaalada kala duwan waa wax fudud. Laakiin jiraan wax aad samayn kartaa in app la hal tuubada ma aha!
Mid aad u fudud in la fahmo UI
Aad degdeg ah oo hufan
Xulashada u abuse wac nadiifinta
Qasaarooyinka: UI ma updated in Android 4.0 heerka
6. Avg ee Memory & Cache Coobbi
Description: Laga soo bilaabo dadka loo yaqaan wanaagsan ee Chine ammaanka iyo antivirus, brand yimaado codsi cusub xaadhista khasnado in gabi ahaanba waa sida ugu fiican ee wax doorasho liiskan. App waa mid fudud, degdeg ah, oo iftiin lama filaan ah. Waxaan qabaa inay tahay xawaaraha app this runtii in ay taasi wax ka badan marka laga reebo wax kasta oo kale. Laga soo bilaabo kaliya page caga aad app waa ay fududahay in masixi wicitaankaaga iyo taariikhda qoraalka, taariikhda dhirta, iyo dabcan aad khasnado.
Faa'iido: Secure iyo ammaan in la isticmaalo.
Qasaarooyinka: muuqaalada nadiifinta Limited.
7. Coobbi Quick
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.5 Description : Coobbi Quick ilaa nadiifiyaa khasnado oo dhan iyo taariikh si loo dedejiyo aad telefoon iyo tayadoodii kartiyeed. Iyadoo sifooyinka soo socda waxaa hubaal waa mid ka mid ah barnaamijyadooda fiican ku dhawaad.
Cache Nadiifi: nadiifi khasnado ee Chine oo dhan aad la leedahay kaliya hal tuubada kaliya.
Histories nadiif ah, sabuurad nadiif ah, taariikhda browser, Google Play taariikhda raadinta dukaanka, taariikhda Gtalk raadinta iwm
Log Call nadiif ah, dhammaantoodna / soo socda xilka Guda Nadiifi / / seegay .
SMS Nadiifi: farriimaha nadiifi mid ka mid ah ama dhammaan xiriirada.
Design interface Nice
Easy in ay isticmaalaan iyo dareen
Waxay abuurtaa nuqul raad raac ah oo Registry
Ma aad ku dari kartaa barnaamijyadooda cusub liiska nadiifinta.
8. Power Nadiif ah
Description: Waxay ka caawisaa hagaajinta hawl-qabadka qalabka Android aad. Waxaa nadiifin kartaa files haraaga ah iyo bidix barnaamijyadooda, ayaa suubis ah xasuusta, maamuli karaan barnaamijyadooda daray hesho macluumaad faahfaahsan oo sida qalab lagu kaydiyo, RAM iyo xawaaraha processor. Waa fudud oo degdeg badan si ay u isticmaalaan.
Dashboard nidaamsan ee nidaamka muhiim stats
Easy in ay isticmaalaan qaababka nadiifsan
Qalab stats faahfaahsan
Muuqaalada dheeraad ah sida Manager Privacy iyo noocyada kala duwan ee wargelinta
Xasuusta suubis laga yaabaa in aanay lagama maarmaan u ah qalabka Android ugu
Dhowr muuqaalada waxaa lagu aasay qaababka kale ee
Description: 360 Security waa Suite ka mid ah qalab ka mid ah antivirus iyo telefoonka smart xal kale hagaajinaysa u Android telefoonada smart. Isagoo sheegay in uu ku raran yihiin qaababka noqon doono yaraynta ah.
"Ciidamada Mindi Swiss" qalabka ammaanka iyo ayna
Oo ay ku raran muuqaalada
Mudadan Personal la nadiifiyo xasuusta.
Waayo, superstructures 10aad
Description: Pro SuperBox waa 10-in-1, 'mindi ciidamada Swiss' ah qalab waxtar leh. Waxaa ka mid ah: Xasuusta iyo Maareeyaha processor, Battery Monitor, rakibayo, Uninstaller, Apps inay kala iibsiga card SD (Apps2SD), Coobbi Cache, Task Killer, Settings, File Manager iyo ugu dambayntii shaqada loo ilaaliyo oo go'aaminaya heerka khatarta ah ee Chine gaar ah.
10 hawlaha kala duwan ee 1 codsiga fudud
Easy in ay isticmaalaan iyo falgali
Apps in SD arbushin ilaa feature waa run ahaantii waxtar leh
Tixgelinta oo deg deg ah si ay u isticmaalaan
Features labada batari iyo widget dilaaga hawl Qasaarooyinka:
Fiirsaneysa qaaliga ah waxaa jira version ad ah ee Suuqa Android
Interface ayaa laga yaabaa inay tahay wax yar-taariikhaysan raadinaya, halka tani ma detract ka shaqeynayaan
> Resource > Clean-up > 10 Best Phone Apps Nadiif ah